Dataset များ (27)
မြန်မာ (14) ကမ္ဘောဒီးယား (13) ဗီယက်နမ် (6) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (5) ထိုင််း (4) တရုတ် (2) Global (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (27) ဗမာဘာသာစကား (2) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (2) ခမာဘာသာစကား (1)
CSV (17) WMS (14) GeoJSON (10) SHP (10) JPEG (9) KML (9) DB_TABLE (6) HTML (6) ZIP (4) XLSX (3) TIFF (2) TXT (2) GeoTIFF (1) raster (1) XLS (1)
Open Development Ca... (9) Open Development My... (8) Open Development Me... (5) Open Development Vi... (2) The Asia Foundation (2) Open Development Laos (1)
လူဦးရေ (27) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (15) လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆ... (5) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (3) သန်းခေါင်စာရင်းများ (2) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (2) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (1) အုပ်ချုပ်ရေး (1) စိုက်ပျိုးရေး (1) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (1) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (1) စွမ်းအင် (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသေ... (1) ကျား၊မ သဘော (1) မြေယာ (1) မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်... (1) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု (1) ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်... (1) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (1) လမ်း၊ တံတားများ (1) SDG 11 Sustainable ... (1) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (1) ဆင်းရဲသူများ (1) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (1) မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေ... (1) မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတို... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1)
Creative Commons At... (9) CC-BY-4.0 (7) unspecified (5) CC-BY-SA-4.0 (2) Creative Commons At... (2) CC0-1.0 (1) License not specified (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Population None: dataset
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 11 မတ် ရင်းမြစ်: National Institute of Statistics, Directorate General for Health... ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုများ ရရှိနိုင်မှု, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး, လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
This dataset describes the 'neonatal mortality rate' (number of deaths during the first 28 completed days of life per 1,000 live births inagiven year or period) and the...
ဗီယက်နမ် 2021၊ 19 ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Documentation and Statistical Services Center လူဦးရေ
Global Human Population Density 2000-2019
Global 2020၊ 13 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Global Information and Early Warning System on Food and... လူဦးရေ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2019၊ 12 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: Major Urban Areas: Published by DeLorme Publishing Company, Inc.... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 11 ဇွန် ရင်းမြစ်: Royal Government of Cambodia, Ministry of Planning, National... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
This dataset provides projected population of 2030, projected annual growth rate in each province in Cambodia, given by National Institute of Statistics and the United Nations....
ကမ္ဘောဒီးယား 2017၊ 23 ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: -Ministry of Planning of Cambodia:... ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ဆက်ဆိုင်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဆင်းရဲသူများ, လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
This dataset in levels of commune, district and province includes information about total population, total family and poverty rate in Cambodia in 2015. The non-spatial data is...
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊ 13 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Official website of National Institute of Statistics... လူဦးရေ, သန်းခေါင်စာရင်းများ
This dataset providesaprovisional census of the population in the Kingdom of Cambodia in 2019, which shows the total population, total population of males and females, total...
The number of marriages in 2018
ဗီယက်နမ် 2020၊ 14 ဧပြီ ရင်းမြစ်: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 လူဦးရေ
မြန်မာ 2020၊5ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေအလုပ်သမားးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
မြန်မာ 2020၊3ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း, သန်းခေါင်စာရင်းများ
မြန်မာ 2020၊2ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
၂၀၁၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်း ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ကမ္ဘောဒီးယား 2015၊4အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: National Institute of Statistics, Directorate General for Health,... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
The 2010 Cambodia Demographic and Health Survey (2010 CDHS) provided by the Ministry of Health and Ministry of Planning isacollection of data to monitor and evaluate...
ကမ္ဘောဒီးယား 2015၊4အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Royal Government of Cambodia, Ministry of Planning, National... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
This vector dataset provides the population density by commune in Cambodia, as provided by Cambodian Demographic Census 2008 (Ministry of Planning, National Institute of...
ကမ္ဘောဒီးယား 2015၊4အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Royal Government of Cambodia, Ministry of Planning, National... ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း
This vector dataset provides the net migration rate by district in Cambodia, as provided by Cambodian Demographic Census 2008 (Ministry of Planning, National Institute of...
Migrants to Pailin
This vector dataset describes the migrants rate to Pailin by district in Cambodia, as provided by Cambodian Demographic Census 2008 (Ministry of Planning, National Institute of...